यसपाली दशैँमा टिका लगाउन घर बाहिर नजाने कि ? – Tesroaankha | Nepal's leading online news portal | Nepali Online News
२१ आश्विन, २०७७ ०७:५९ मा प्रकाशित
काठमाडौं – विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको संक्रमण अरु देशमा घट्दै गईरहेको भएपनी हाम्रो देशमा दिनानुदिन बढ्दै गईरहेको तथ्य सर्वविदितै छ । यसैबिच हामी नेपालीको महान चाड बडादशैँ शुरु हुँदैछ ।
हाम्रो धर्म, संस्कृती र परम्परालाई हेर्ने हो भने नवमीका दिनसम्म हामी शक्तीपिठ दर्शन गर्छौं र बाँकी समय घरमा आफ्नै परिवारसँग मनाउँछौँ । यसपाली शक्तीपिठ दर्शन गर्नेहरुको संख्या त पक्कै कम हुने देखिन्छ किनकी हामीहरु आफैँ त्यस्ता ठाउँमा कमै जानेछौँ । त्यसका साथै अधिकांश शतीपीठहरुमा नित्य पूजा मात्रै हुने र दर्शनार्थिहरुलाई प्रवेश निषेध गरिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
तर बडादशैँको मुख्य दिन दशमीका दिनदेखी पूर्णिमासम्म हामीले जे गर्ने गरेका छौँ शायद यो वर्ष पनि त्यही गर्ने हो भने सिँगो देश नै कोरोनाको चपेटामा पर्ने निश्चित देखिन्छ । हो, म यतिबेला टिका लगाउने प्रचलनको कुरा गर्दैछु ।
दशमीका दिन आफ्नो घरमा ठुलाबडासँग टिका लगाईसकेपछी हामीकहाँ आफ्ना नातागोता, आफन्त र ईष्टमित्रको घर-घरमा गएर ठुलाबडा, मान्यजनको हातबाट टिका ग्रहण गरेर आशिर्वाद लिने प्रचलन शदियौँदेखी चलिआएको छ । यसो नगरौँ भन्दा कसैको आस्थामाथी ठाडो प्रहार गरेको जस्तो देखिन्छ । तर एकपटक गहिरिएर सोचेर हेरौँ त । के यो महामारीमा कसैको घरमा गएर टिका लगाउनु उचित होला त ?
पक्कै पनि आफ्नो प्रियजन र नजिकको आफन्तजनको हातबाट टिका नलगाउने कुरा हामी कसैलाई सोच्न मन छैन तर एक चोटी थोरै हिसाब गरेर हेरौँ । तपाईंका प्रियजन र आफन्तजन कती जना होलान् ? सानै परिवार रहेछ भने कम्तिमा पनि २० देखी ५० जना । ती प्रियजनका अरु प्रियजन कती होलान् त ? कम्तिमा फेरी अर्को २० देखी ५० जना । यसरि हिसाब गर्ने हो भने हामी तीन चार घरमा मात्र टिका लगाउन जाँदा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सयौँ जनाको सम्पर्कमा आइसकेका हुनेछौँ । ती मध्य कुनै एक जनालाई कोरोना संक्रमण रहेछ तर लक्षण देखिएको रहेनछ भने हामी मध्य धेरैलाई संक्रमण हुनसक्छ ।
कोरोनाको अहिलेसम्मको विश्वव्यापी तथ्यांक हेर्ने हो भने ३ प्रतिशत मृत्युदर रहेको छ । अब सोच्ने पालो तपाईंको । के तपाईं दशैँमा टिका लगाउने र प्रियजन भेटघाट गर्ने बहानामा परिवारको कुनै सदस्य गुमाउन चाहनुहुन्छ त ? या कुनै सदस्यको ज्यान जोखिममा पार्न चाहनुहुन्छ ? हामीले देखिसकेका छौँ कि कोरोनाले शिशु, बालक, वयष्क वा वृद्ध जो कसैको पनि प्राण लिन सक्दोरहेछ । अब निर्णय लिने पालो तपाईंको । के गर्ने के नगर्ने ।
हामी नेपालीले कोरोनालाई हलुका रूपमा लिएको पनि सबैलाई थाहै छ । नत्र दुनियाँभर संक्रमण दर घटिरहेका बेला हाम्रो देशमा दैनिक रूपमा संक्रमण किन बढ्दै जान्थ्यो ? यही कुरा साथिभाई माझ गर्दा नेपालीको प्रतिरोधात्मक शक्ती अरुको भन्दा धेरै छ र म आवश्यकता भन्दा धेरै डराएको प्रतिकृया धेरै आए । होला, हाम्रो हावापानी र खानपानले हाम्रो रोग प्रतिरोधात्मक शक्ती अरुको तुलनामा थोरै बढी होला । तर कुनै रोग लागेर दुख पाउनुभन्दा रोग लाग्नै नदिनु उचित होईन र ? यसलाई रोगसँग डराएको भन्दा पनि सजग भएको भनिँदैन र ?
अझ म त के भन्छु भने सरकारले दशमीका दिनदेखी पूर्णिमाको दिनसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सबै हिँडडुल बन्द गर्ने आदेश जारी गर्नुपर्छ । होईन भने भगवान भरोसामा चलेको यो देश र यहाँका जनातालाई भगवान बाहेक अरु कसैले बचाउन सक्दैनन ।
हामी हाम्रो धर्म, संस्कृती र परम्परा अनुसार ढोकामा आएका कसैलाई पनि भित्र छिर्न नदिई फर्काउन त सक्दैनौँ तर हामी सबैजना आफैँ सजग भएर घर बाहिर निस्किएनौँ भने पक्कै पनि जुन भयावह स्थिती सिर्जना हुनसक्ने सम्भावना छ त्यसलाई न्युनिकरण गर्न सजिलै सफल हुन्छौँ । त्यसैले यो प्रश्न गर्दैछु यसपाली दशैँमा टिका लगाउन घर बाहिर आफ्नो प्रियजन, नातागोता, आफन्तजन र ईष्टमित्रको घर-घरमा नजाने कि ? कमेन्टमा तपाईंको विचार अवश्य शेयर गर्नुहोला ।